Mizara ny toro-hevitra sy ny trangan-javatra avy amin'ny Semalt amin'ny fomba hanesorana rindrambaiko referrer avy amin'ny Google Analytics
Ny spam referrer dia manondro ireo fitsidihana hosoka nalefa tamin'ny tranokalan-tserasera amin'ny tanjona amin'ny fanatsarana ny fikarohana fikarohana. Ivan Konovalov, mpitarika ny Success Manager Semalt , dia manazava fa ny spam referrer dia mamoaka ny data sy ny tatitra avy amin'ny Google Analytics, mahatonga ny sarangan'ny mpivarotra hamakafaka ny vokatra sy handray fanapahan-kevitra ara-barotra mahomby.
Understanding spam referrer
Ny sasany amin'ireo webmasters dia miatrika ilay fanamby mba hahatakatra fa ny spam referrer dia mahakasika ny antontan'isa ary ny antony maha-zava-dehibe ny manaisotra spam referrer amin'ny Google Analytics. Ho an'ny taona vitsy lasa izay, ny ankamaroan'ny vohikala sy ny kaonty Google Analytics dia voakasiky ny spam ghost. Izany no antony, raha hitanao fa misy tsindry amin'ny fifamoivoizana ao amin'ny tranonkalanao izay avy amin'ny tranonkala hafa, fotoana mety hanaovana izany. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny kaonty voakasik'ireo spam referrer dia mampiseho manaraka ny vanim-potoan'ny fotoana maharitra sy ny taham-pidirana ambony.
Nahoana ny mpanafika dia mandefa spam referrer amin'ny kaontinao GA
Mba hanatsarana ny fizarana SEO
Rehefa namoaka ny antontan'isa momba ny tranonkala ianao, dia miafara amin'ny tranokalan'ny tranonkala spammers. Raha mikaroka ny tranonkalanao amin'ny fakana sary ny fitaovam-pikarohana, dia heveriny koa fa ny rohy eo amin'ny tranokalanao dia sarobidy be. Ny lazan'ny fiantsoana fiantsoana dia singa manan-danja izay heverin'ny fikarohana. Ny backlinks dia manohana ny spammers, izay ahafahan'izy ireo miditra ambony amin'ny algorithm.
Mankatoa ny mety ho an'ny mpitsidika
Tsindrio ny rohy nalefa taminao, afaka manimba haingana ny androm-piainanao ny spam, satria ny rohy spammy dia misy malware sy dokam-barotra. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ireo mpitsoa-ponenana dia manodina ireo mpitsidika amin'ireo tranonkala malaza amin'ny tanjona hivarotra vokatra sy serivisy.
Ahoana ny fiantraikan'ny spam mikasika ny kaontinao GA
Ny fitsidihan'ny mpitsoa-ponenana diso dia tena mahasosotra sy mampatahotra. Ny fitsidihana dia manelingelina ny tatitra Google Analytics fa tsy amin'ny tranonkalanao. Ireo spam referrer dia miasa ho an'ny tombontsoan'ny spam. Tahaka ny mailaky ny spam, ny log de spam dia mandany fotoana bebe kokoa rehefa miasa amin'ny fomba hanakanana azy maharitra.
Fanesorana ny fanesorana ny famindrana
1. Mampiasa solosaina hanesorana spam referrer ao amin'ny kaontinao GA
Ny fialana amin'ny sari-pialan'ny fitsaboana ao amin'ny kaontinao Google Analytics dia mamoaka fiheverana goavana sy fahalalana ara-teknika;
Diniho ny tatitra fanondroana ny kaontinao ary ampio tranokalam-baovao misy anao ao amin'ny lisitrao;
Sokafy ny kaonty Google Analytics ary milazà ny 'Admin Section';
Mamorona filtre vaovao. Amin'ity tranga ity, ampiasao ny karazany efa voafaritra;
Mametraka sivana fanandramana mba tsy ho very ny fanomezan-dalanao rehefa esorina ny spam avy amin'ny kaontinao;
Hanampy filaharana vaovao hanakanana ny fananganana spam referrer
2. Mampiasa sivana
Ny fananganana sehatra dia manampy anao hanasitrana ny spam taloha, sy hiatrika ny mpihaino anao amim-pahatokiana sy handrefesana ny loharanom-pifandraisana. Rehefa mamorona ny segondrao dia aza adino ny milaza azy ho vokatra tsara.
3. Mampiasa ny anaran'ny mpampiantrano sy ny .htaccess
Ampiasao ny solosaina finday sy ny rakitra fikirakirana .htaccess mba hanesorana ny adiresy referrer mamela ny angon-drakitra ao amin'ny kaontinao GA. Ny sivana amin'ny plugins dia manakana ny spam tsy hoeritreretina amin'ny kaontinao amin'ny ho avy. Na izany aza, ny fampiasana teknolojia fanoratana ny htaccess dia mikendry ny mpividy manana fahaizana teknika. Ny fanatanterahana ilay dingana diso dia mety hianjera amin'ny fidinan'ny tranokalanao.
Ny spam referrer dia miompana amin'ny data Google Analytics ary mitondra fiara mifototra amin'ny tranokalanao. Ny solonanarana finday, sehatra, ary ny .htaccess dia manampy amin'ny fanatanterahana angona marina ao amin'ny kaontinao GA. Ampiasao ireo teknika voalaza etsy ambony mba hahazoana antontan'isa azo antoka ao amin'ny kaontinao Google Analytics Source .